တရုတ် Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အပူပေးစက် > Synchronous Thermal Analyzer ဖြစ်သည် > Synchronous Thermal Analysis Equipment
Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများ is combines thermogravimetric analysis TG with differential thermal analysis DTA or differential scanning calorimetry DSC. The same sample can be used to obtain TG and DTA or DSC information simultaneously in the same measurement.
1. Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများ Introduction
1: အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ အပူချိန်ကိုလျင်မြန်တည်ငြိမ်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3: ဆော့ဝဲတွင်တပ်ဆင်ထားသောစမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများ၊ အချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်မှုနှင့်အစီရင်ခံစာပုံစံများပါရှိပြီးအမှန်တကယ်အစီရင်ခံစာများကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသည်။
4: built-in အပူချိန်မြင့်ပလက်တီနမ်အာရုံခံကိရိယာ
2. Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများ Parameter
အခန်းအပူချိန် ~ ၁၂၅၀ âƒ
အပူ၊ အဆက်မပြတ်အပူချိန်၊ အအေး
၁၅ မိနစ် (၁၀၀၀ âƒâ€€ ¦ ၁၀၀â„ ƒ)
1mgï½ž2gကို 30g အထိချဲ့နိုင်သည်
မိနစ် ၀၀၀ မှမိနစ် ၃၀၀ အထိထင်သလိုသတ်မှတ်ထားသည်
24bit အရောင်၊ ၇ လက်မ LCD touch screen display
ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ ဓာတ်တိုးခြင်း၊ လျှော့ခြင်း၊ ငြိမ်ခြင်း၊ ရွေ့လျားခြင်း
built-in ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုမီတာ၊ two-way gas switching နှင့် flow rate control တို့ပါဝင်သည်
ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သော software သည် TG curve ကိုအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကိုပုံနှိပ်သည်
AC220V 50Hz ဖြစ်သည်
3. Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများ Feature And Application
DSC: အရည်ပျော်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုအပူချိန်နှင့်တုံ့ပြန်မှုအပူ၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းအပူ၊ သီးခြားအပူ ...
TG: အပူတည်ငြိမ်မှု၊ ပြိုကွဲခြင်း၊ ဓာတ်တိုးခြင်းလျော့ချခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်းနှင့်စုပ်ယူနိုင်ခြင်း၊ အခမဲ့ရေနှင့်ကြည်လင်သောရေပါဝင်မှု၊ အစိတ်အပိုင်းအချိုးတွက်ခြင်းစသည်
4. Fields of use Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများ
Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်းများ hasawide range of applications, especially in the research and development, performance testing and quality control of materials.
မေး။ ။ မင်းကုမ္ပဏီက Synchronous Thermal Analysis Equipment လုပ်နေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
hot Tags:: Synchronous အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပစ္စည်း၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE